संसद पुनस्थापना कसले गरिदियो ? ड*रै नमानी लहनुले खोलिदिए प्र*चण्डको ठुलो पो*ल; LAHANURAM CHAUDHARY (भिडियो हेर्नुहोस्) -
Home News संसद पुनस्थापना कसले गरिदियो ? ड*रै नमानी लहनुले खोलिदिए प्र*चण्डको ठुलो पो*ल;...
संसद पुनस्थापना कसले गरिदियो ? ड*रै नमानी लहनुले खोलिदिए प्र*चण्डको ठुलो पो*ल; LAHANURAM CHAUDHARY (भिडियो हेर्नुहोस्)
निर्देशक चौलागाईंले यी प्रश्नावलीको आधारमा गाउँ र सहर छुट्टिने बताए। २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ सम्म राष्ट्रिय जनगणना हुन गइरहेको छ।
Previous articleअभि*युक्त जे*ल चलान भएपछि मृ*तक प्रबिनको साहसी बहिनि मिडियामा,अमेरिका त्याग्छु तर ह*त्यारालाई छोडदिन (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleओलीको चमत्कार, आज एकैदिन तीन दर्जन पुल शिलान्यास र उद्घाटन, सबैलाई च*कित् नै पार्यो